Xulka Wales oo xajistay kaalinta Kowaad Group B kadib markii ay dhagaha u laabeen xulka Russia | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Xulka Wales oo xajistay kaalinta Kowaad Group B kadib markii ay dhagaha u laabeen xulka Russia
Xulka Wales oo xajistay kaalinta Kowaad Group B kadib markii ay dhagaha u laabeen xulka Russia
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 20-06-16 8:57 PM Xulka Wales ayaa markii ugu horeysay taariikhdooda u soo gudbay wareega 16ka ee tartanka qaramada Yurub ka dib markii ay 3-0 kaga takhaluseen xulka Russia iyadoo Gareth Bale iyo Aaron Ramsey ay shabaqa soo taabteen. Xulka Wales ayaa ku soo baxay kaalinta koowaad ee Group B waxaana ay booskaas ka galeen xulka England oo ugu cadcadaa kaalinta koowaad balse ku hungoobay.
Xulka Wales oo ka careysnaa guuldaradii ka soo gaartay xulka England kulankoodii ugu danbeeyay ayaa ku ciil baxay xulka Ruusha qeybtii hore iyadoo ciyaar degdegsiimo leh oo xamaasad badan kala hortagay xulka Russia.
DAQIIQADII 11aad GOOOL!!! Kaliya 11 daqiiqo ayay ku qaadatay in Wales ay hogaanka u qabato ciyaarta markii kubad ay ku soo ceshteen bartamaha garoonka uu helay Allen kaasoo kubad dhex bixis fiican u sameeyay Aaron Ramsey ka hor inta uusan xiddiga Arsenal kubada si macaan uga dulqaadin goolhaye Akinfeev waana goolkiisii 11aad ee kulan heer caalami.
DAQIIQADII 20aad GOOOL!!! 20 daqiiqo markii ay socotay ciyaarta waxa ay aheyd 2-0, waana xulkii ugu horeeyay ee Euro 2016 ee sidaasi sameeya, baas uu soo dhigay Bale oo la taabtay ayaa waxaa garabka bidix ee xerada goolka ku helay daafaca Wales Taylor, darbadiisii ugu horeysay ee goolka waxaa badbaadiyay goolhaye Akinfeev laakiin weydiisashadii labaad shabaqa faaruq ah ayuu kubada dhex dhigay.
Waa goolkii ugu horeysay ee uu u dhaliyo xulka Wales abid, waana goolkiisii ugu horeysay ee uu dhaliyotan iyo 2010 markaasoo uu daawadayaal 298 qof ah uu gool ku hordhaliyay.
Waxa ay ciyaarta qeybteedii hore ku soo idlaatay 2-0 oo ay hogaan ay u qalantay ku heysay xulka Wales.
DAQIIQADII 67aad GOOOL!!! Wales ayaa sii xaqiijisatay guusheeda caawa ka dib markii Ramsey uu kubad u dhex bixiyay xerada goolka dhexdeeda Gareth Bale kaasoo isna kubada ku taabtay shabaqa isagoo dabamariyay goolhaye Akinfeev taasoo ciyaarta ka dhigtay 3-0.
Gareth Bale ayaa shabaqa soo taabtay kulan walba oo wareega group-yada ah, waana xiddiga haatan haya hogaanka gooldhalinta tartanka Euro 2016 isagoo ku haya seddex gool.
XAQIIQ: Gareth Bale waa ciyaaryahankii ugu horeeyay ee seddex kulan oo isku xigta gool ka dhaliya tartanka qaramada Yurub tan iyo markii uu Milan Baros afar kulan oo isku xigta uu shabaqa soo taabtay sannadii 2004.
Ciyaarta waxa ay ku soo dhamaatay 3-0 oo ay xulka Wales ku gumaadeen dhigooda Russia. Wales waxa ay kaalinta koowaad kaga soo baxday Group B iyagoo booskaas ka galay xulka England oo barbaro goolal la’aan ah la galay Slovakia, halka xulka Ruushka uu ka haray tartankaan.
XAQIIQ: Wales ayaa markii ugu danbeysay ee ay u soo baxaan wareega xiga ee tartan caalami ah waxa ay aheyd Koobkii Adduunka ee 1958.